Hamado Music, mpilalao mozika avy amin'ny rahona | Vaovao IPhone
Tsy ny rehetra no vonona na mahavita mandoa vola amin'ny serivisy mozika streaming ary amin'izao fotoana izao dia mbola maro ireo mpampiasa izay aleony mandika ny mozika ankafiziny amin'ny fitaovany na mitahiry izany ao anaty rahona. Andro vitsy lasa izay dia nampahafantatra anao momba ny rindranasa iray izahay izay mamela anay hitendry mozika fotsiny avy amin'ny serivisy fitehirizanay mahazatra ao anaty rahona fa tsy namela anay handika mozika ho amin'izany, mba hilalaovanay azy. Nanana ny tombony sy ny lesoka io. Androany dia miresaka momba ny fampiharana Hamado Music iray hafa isika, fampiharana iray izay, ankoatra ny famelana anay hitendry ny mozika ankafizinay voatahiry ao anaty rahona, dia mamela antsika ihany koa handika mozika ho azy hilalaovana azy nefa tsy mila mampiasa iTunes.
Hamado Music dia manome antsika ny fahafaha-miteraka ny mozika ankafizinay voatahiry OneDrive, Google Drive na Dropbox, Ankoatry ny famelana antsika handika mozika amin'ny telefaona hitendry azy mivantana avy amin'ny application, tsy mila mampiasa ny application Music, mozika izay tsy maintsy nasiantsika marika tsara mba hampisehoana azy tsara amin'ny fampiharana, zavatra izay tsy mbola ampiasain'ny mpampiasa maro mihitsy tiany momba ity rindrambaiko ity ary nifidy ny hikaroka mpilalao mozika antoko fahatelo ianao.
Hamado Music dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 0,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra. Raha ny interface interface amin'ny app dia tsy dia mahavariana fa amin'ny faran'ny andro dia ny momba azy dia mandeha izy io, satria izy io, satria raha mandeha ny mozika dia tsy hijery ny efijery an'ny fitaovana. Hamado Music dia ahafahantsika milalao mozika amin'ny alàlan'ny rakikira, amin'ny alàlan'ny hira na amin'ny artista, zavatra izay hanampy betsaka antsika amin'ny resaka mozika tadiavinay.
Ity rindranasa ity dia manana naoty 5 amin'ny kintana 5 eo ho eo, ary safidy tsara io raha mitady fampiharana an'io karazana io amin'ny iPhone na iPad-nay isika. Mila farafaharatsiny farafaharatsiny iOS 8 na avo kokoa, amin'ny teny Anglisy ary mihoatra ny 20 MB monja ao amin'ny fitaovantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Hamado Music, mpilalao mozika avy amin'ny rahona